जन्डिस भनेको के हो ? यो कसरी सुरु हुन्छ ?
काठमाडौँ । आँखाको सेतो भाग, हत्केला, अनुहार वा सम्पूर्ण शरीरमा पंहेलो रंग देखिएको अवस्थालाई जन्डिस भनिन्छ । जन्डिस आँफैमा रोग होइन । यो ५० भन्दा धेरै रोगको साझा लक्षण मात्र हो । जसरी ‘ज्वरो’ आँफैमा रोग होइन, हजारौं रोगहरुको साक्षा लक्षण हो त्यसरी नै जन्डिस पनि शरीर भित्र हुने धेरै साधारण र असाधारण रोगहरुले बाहिर देखाउने एउटा लक्षण मात्र हो । जन्डिसको कहिल्यै पनि उपचार गरिदैन । बरु जुन कारणले जन्डिसको लक्षण देखाउंछ सोहि कारक तत्वको उपचार गरिन्छ ।
जन्डिसको लक्षण देखिने बित्तिकै डाक्टरकोमा गएर के कारणले गर्दा जन्डिस भएको हो त्यो पत्ता लगाउन पर्छ । तपाईंको डाक्टरले पहिला पिसाब र रगत जांच गर्छन् । अलि जटिल खाले रोगको शंका लागेमा वा रगत र पिसाबबाट सम्पूर्ण जानकारी मिल्न सकेन भने अल्ट्रा साउन्ड, सिटी स्क्यान, एमआरआई ईआरसीपी आदिबाट शरीर भित्र के भैराखेको छ, कुन कारणले यस्तो भयो भनेर खोजीनिती गर्छन् ।
अधिकांश केसहरु अनुसार जन्डिस सामान्य रोगहरु/अवस्थाहरुबाट हुने गर्छन् र ३ हप्ताको आसपासमा आँफै सन्चो हुन्छ । यस्तो बेलामा डाक्टरले औषधि दिइहाले भने पनि शरीर चिलाउन नदिने, बान्ता हुन नदिने औषधि, भिटामिनहरु आदि वा कहिले काहीं केहि समयको लागि बाइल बन्ने प्रक्रिया मत्थर गर्ने बाइल स्टोन बन्न नदिने औषधि आदि दिन्छन् ।